Miatrika Fitsaràna Any Parisy i Teodorín N. O. Mangue, Zanakalahin’ny Filohan’i Ginea Ekoatorialy · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Stephanie Phaneuf
Voadika ny 06 Aogositra 2017 5:52 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, English, русский, Español, Français
Teodorín N. O. Mangue sy ny rainy tao amin'ny Firenena Mikambana – Sehatra ho an'ny daholobe
Na dia teo aza ireo fanakànana marobe nataon'ireo mpisolovava azy, dia natao tany Parisy tamin'ny 19 Jona 2017 ny fitsaràna an'i M. Teodorín Nguema Obiang Mangue, Filoha Lefitry ny firenena sady zanakalahin'ilay mpanao didy jadon'i Ginea Ekoatorialy. Tsy maintsy hadihadian'ny fitsarana pariziana ny fiampangàna an'i Teodorin, toy ny ” famotsiambola sy fanararaotana ny fananam-bahoaka”,” fanodikodinana volam-panjakana”, “fanararaotam-pitokisana”, “kolikoly”. Ireo fikambanana roa tsy miankina amin'ny fanjakana, Sherpa sy Transparency International, no mpitory.
Sokajiana ao anatin'ny raharaha “fananana azo tamin'ny tsy marina“ ity fitsaràna ity. Ampatsiahivin'ny tranonkala ccfd-terresolidaire.org ny fiandohan'ny raharaha rehetra :
Tamin'ny volana Martsa 2007, namoaka tahirin-kevitra mombanà asa antsoina hoe ” « Fanànana azo tamin'ny tsy marina …mitombo be hatrany. Ny haremben'ny mpanao didy jadona sy ny fankasitrahan'ny tandrefana ” tamin'ny aterineto ny CCFD-Terre solidaire.
Voasintona in-100.000 no sady fanamafisana ireo fitoriana an'i Omar Bongo, Denis Sassou Nguesso ary Teodoro Obiang Nguema napetraka tany Frantsa, ary ny fitoriana ity farany any Espaina, ity fanadihadiana manan-tantara ity.
Roa taona aty aoriana, tamin'ny 2009, voasoratra sy navaozina indray tao amina tatitra vaovao nohavaozina ny fanadihadiana « Fanànana azo tamin'ny tsy marina, an'iza ny tombony amin'ilay heloka bevava ?” Naverina nodinihina indray ireo fanànana voahodin'ireo mpitondra maherin'ny 30 tany amin'ireo firenena an-dàlam-pandrosoana.
Vinavinain'ny CCFD-Terre Solidaire ho eo anelanelan'ny 105 sy ny 180 lavitrisa dolara no nangalarin'ireo mpitarika tsy refesi-mandidy sy mpanao kolikoly avo lentan'ny tanibe maro (Afrika, Azia, Amerika Atsimo ), tato anatin'ny folo taona farany.
Etsy andaniny, ny Banky Iraisampirenena sy ny Firenena Mikambana kosa dia maminavina fa eo anelanelan'ny 20 ka hatramin'ny 40 lavitrisa dolara, isan-taona, no mandositra ny firenena an-dàlam-pandrosoana noho ny kolikoly.
Manana ny ampy hiatrehana ny fombam-pitsaràna lavabe, ny voampanga ka dia niroso tamin'ny ady amin'i Frantsa izay maharitra am-polo taona. Ampatsiahivin'i Kouamé L.-PH. Arnaud KOUAKOU avy amin'ny tranonkalan'ny burkina24.com ilay zava-nisy :
Folo taona lasa izay, nametraka ny fitoriany voalohany an'i Teodorin Obiang tamin'ny « fanànana azo tamin'ny tsy marina» ny ONG Sherpa sy ny Transparency International.
Voaravaka andiana endrika ara-politika sy araka ny lalàna tsy nampoizina, toy ny fitazonana ny fanànan'ny zanaky ny filoha, ireo fiara sy famantaranandro lafo vidy ary ireo trano any Parisy, ny fotoana teo anelanelan'ny fametrahana fitarainana voalohany sy ny fiantombohan'ny fitsaràna.
Tsy nisahirana nankany Parisy ilay voampanga fa ireo mpisolovavany telo no nisolo tena azy, izay araka ny Africanews, dia paikady mifototra amin'ny fanasongadinana ny tsimatimanota diplomatika izay tombontsoa ananany amin'ny maha-olom-panjakana faharoa azy.
Firenena afrikana faha-7 mpamokatra solitany i Ginea Ekoatorialy, na dia 759 451 fotsiny aza ny mponina ao aminy. Tamin'ny 2008, nahatratra 41 267,13 dolara ny vola miditra isam-batan'olona, izany hoe ambony noho ny an'i Alemaina, 41 178,5 dolara tamin'ny 2015. Miankina indrindra amin'io famokarana io ny toekaren'ny firenena, rehefa nitotongana ny vidin'ny solika tsy voadio dia nidina niaraka taminy ny vola miditra isam-batan'olona, hatramin'ny 14 439,6 dolara tamin'ny 2015. Mbola ambony noho ny an'ireo firenena maro mpikambana ao amin'ny firaisambe Eoropeana izany ary ny ekoato-gineana no afrikana manankarena indrindra amin'ny salan'isa.
Indrisy anefa, teoria fotsiny ihany izany satria ny zava-misy marina dia ratsy tsinjara io sakafo avy any ambany tany sy avy any amin'ny faran'ny ranomasina io. Raha toa ka miha-manankarena ireo sokajin'ny mpitondra, dia tsy nahazo vokatsoa tamin'izany kosa ny avy amin'ny sehatry ny vahoaka. Ho famintinana ny tahirin-kevitra naparitany, dia izao no nambaran'ny fikambanana miaro ny zon'olombelona, Human Right Watch :
Ohatra, ratsy indrindra manerantany ny tahan'ny fanaovana vaksiny. Ny fanefitry ny raboka amin'ny zaza vao teraka sy ny zaza menavava dia nidina 35% tamin'ny 2015 raha 99% tamin'ny 1995. Tsy manana rano fisotro madio azo antoka akaiky azy ireo ny antsasaky ny ekoato-gineana, taha izay tsy niova hatramin'ny 1995. Tamin'ny 2012, 42%-n'ny ankizy (46.000) tokony hianatra no tsy nandeha an-tsekoly, laharana faha-fito manerantany.
Mitombo ihany koa ny fandaniana miaingitraingitra amin'ny alàlan'ny fandaniana vola be ho an'ny tombotsoan'ireo olo-manankaja vitsy an'isa. Miantso ny Filoha Macron i Sarah Saadounm, mpikaroka, mba handeha lavidavitra kokoa amin'ny ady atao amin'ny famotsiambola sady nanao fanamelohana tao amin'ny tranonkala hrw.org :
Oyala, renivohitra vaovao any afovoan'ny ala be no tetikasa lafo indrindra sy tsy hay hazavaina. Io no renivohitra fahatelo ao amin'ny firenena izay misy mponina iray tapitrisa. Taorian'ny fandaniana lavitrisa maro tamin'ny fananganana ireo tranon'ny ministera tany Malabo, renivohitry ny nosy amin'izao fotoana izao, sy tany Bata, renivohitra iray amin'ny ilany anatin'ny tanibe, dia tetibola 8 lavitrisa dolara ( maherin'ny 7 tapitrisa euros) amboniny no nataon'ny governemanta ho an'i Oyala, hoy ny FMI, izay maminavina fa mitovy amin'ny antsasaky ny tetibolan'ny firenena tamin'ny 2016 izany.
Misy singa mampanahy mampieritreritra fa mety ho hanome vahana ny hetsika fitadiavana tombontsoa manokana io fandaniana be amin'ny fananganana fotodrafitrasa io. Ohatra ny hoe fananana iraisan'ny filoha, ny vadin'ny filoha ary i Teodorin ilay orinasa mpanao trano, miaraka amin'ny ampihimamba amin'ny fanafarana simenitra. Nanintona orinasa vahiny ihany koa ny famoronana io renivohitra vaovao io, izay ahitàna ireo frantsay, toy ny vondrona Egis, niandraikitra ny famolavolàna ilay tanàna.
Amin'ireo fonenana miaingitraingitra any amin'ny toerana mahafinaritra, ireo fiara lafo vidy, ny fanangonana ireo fananan'ny olo-malazan'i Hollywood na ny fanatanjahantena sy ny paradisan-ketra, dia tsy mitsitsy mihitsy ny Filoha lefitra Ekoato-gineana. Ohatra, asehon'ny tranonkala vesper.media fa avo folo heny amin'ny tetibola isan-taonan'ny fanabeazana any Ginea Ekoatorialy ny vidin'ny yacht roa, Ebony Shine, manana halavana 75.75 metatra sy ny Ice mirefy 90 metatra ary avo fito ambin'ny folo heny amin'ny an'ny fahasalamam-bahoaka. Ny fikojakojàna ny Ebony Shine fotsiny dia efa mahatratra ” 800.000 dolara isam-bolana eo ho eo, tsy ao anatin'izany ny solika.”
Nanendry governemanta vaovao, ny rainy, ny Filoha Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, izay efa teo amin'ny fitondrana hatramin'ny 1979, rehefa voafidy indray tamin'ny isam-bato 93,7% tamin'ny aprily 2016. Araka ny mahazatra, dia ny fianakaviana na ireo namana akaiky no mahazo ny toerana misy ranondranony kokoa. Tanisain'i Ondo Ololobi ao aminà lahatsoratra, navoaka tamin'ny Septambra teo, mitondra ny lohateny hoe Ginea-Ekoatorialy: eo an-tànan'ny fianakavian'ny mpitondra ny Fanjakana, ny lisitry ny fianakavian'ny filoha mpikambana ao amin'ny governemanta ary asongadiny ny haremben-dRtoa Constancia Mangue de Obiang, ilay olona mahery indrindran'ny fitondrana. Santionany :
Izy no vadin'i Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Latsaka tanteraka ao ambany fahefany ny filoha. Ampiasainy ireo karazana hafetsena sy fitapitaka mba hampidirana ny zanany lahy voalohany, Teodorín Nguema Obiang Mangue, ho ao amin'ny fiadidiana ny fitondràna ekoato-gineana. Mpanefoefo, maotina sy tsy fahita firy amin'ny sehatra politika izy. Nefa, na dia izany aza, miasa mangina any ambadiky ny sehatry ny lapam-panjakana. Hainy ny mampiasa ny hafetseny, minisitra 30 amin'ny 70 ( ao amin'ny firenena misy mponina 710.000) ao amin'ny governemanta no napetrany. Olona akaiky ny Filoha ireo minisitra 30 ireo.
Ampahafantarin'ny tranonkala diariorombe.es fa nasain'i M. Jerónimo Osa Osa Ecoro, Sekretera Jeneralin'ny antoko eo amin'ny fitondrana, ny Antoko démokratikan'i Ginea Ekoatorialy (PDGE), tsy maintsy manao hetsika amim-pilaminana manoloana ny masoivohon'i Frantsa any Malabo, ny vahoaka amin'ny andro hanombohan'ny fitsarana, ho fanohanana. In-droa vaky trano ity tompon'ny fahefana amin'ireo tompon'ny fahefana izay toa tia vola ity, maherin'ny 39 lavitrisa FCFA [48 640 000,00 EUR] sy 60 tapitrisa Euro no lasan'ireo mpangalatra tamin'ny voalohany.
Eto no hahitanao ny lahatsoratra rehetra navoakan'ny globalvoices.org momba ity lohahevitra Ginea Ekoatorialy ity raha te-hahalala bebe kokoa ianao.